Uhambele uMphakathi Umasipala WaseZinqoleni – eHowzit
Uhambele uMphakathi Umasipala WaseZinqoleni
KUBE intolozo yodwa ngesikhathi uMeya woMkhandlu waseZinqoleni uMeya Amon MAkhosezwe mpisi ememezela emphakathini wakwaNyuswa ngaphansi kwaka ward 1 ukubaumkhandlu usubeke eceleni imali elinganiselwa ku 2million wamrandi ezolekelela ukwahiwa kwengqala sizinda .
Nakuba amalunga omphakathi nawo ezwakalise ezawo izikhalazo ngezinto oshoda ngazo kodwa lwehlile ulaka uma utshelwa ukuthi imali linganiselwa ku1,2million izokwakha umgwaqo obizwa ngeThafeni access road nosewaba isikhalazo kulomphakathi iminyaka eyevile emashumini amabili kwatholakala inkululeko.
UMpisi uthe bengumasipala bayaqinisekisa ukuba bayayihambela imiphakathi kuze bezwe izikhalazo zayo bese bebuyela kubona ukuletha izidingo osuke uhalaze ngazo.
Amalunga omphakathi abe esegxeka kakhulu ukwakhiwa kwezakhiwo zomphakathi bese zingaqedwa ngesikhathi, nelithe uma lichaza elinye elingazidalulanga igama laveza ukuthi kukhona umgwaqo osewaze waqanjwa kwathiwa “Udonga lukaMpisi” ngoba sekwavuleka imisele ngoba ungaqedwanga ukwakhiwa.
Elinye ilunga lomphakathi liveze ukuthi uMasipala wabathembisa ukuthi bazolinyelwa emakhaya neliqhuba lithi bathi uma sebebeza ekhanseleni lendawo uMnu Alex Khawula labatshela ukuthi iMeya yayibheda futhi iqamba amanga.
Ikhansela libe selikuphika lokhu lithi lona lalingeke likhulume ngalohlobo ngompathi walo kakhulukazi umholi weqembu kwaMasipala